Madaxweynaha Mareykanka” Waxaan joojinay taageerada dagaalka Yemen” | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweynaha Mareykanka” Waxaan joojinay taageerada dagaalka Yemen”
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad ka jeediyay booqashadiisii ​​ugu horreysay ee uu ku tago Waaxda Arrimaha Dibadda Khamiistii, isagoo taabtay arrimo badan oo khuseeya Sacuudiga, Ruushka iyo Shiinaha iyo kuwo kale.
Dib u soo noqoshada siyaasada arrimaha dibedda ee maamulka Donald Trump, Biden wuxuu sheegay in Mareykanku uu joojinayo taageeradii uu u fidinayay dagaalka uu hogaaminayo Sacuudiga ee Yemen laakiin wuxuu intaa ku daray in Washington ay sii wadi doonto ka caawinta Riyadh difaaca qaranimadeeda iyo dhulkeeda.
“Dagaalkan waa inuu dhammaadaa ,Si loo muujiyo ballanqaadkeena, waxaan soo afjaraynaa dhammaan taageerada Mareykanka ee ku aaddan howlgallada weerar ee dagaalka Yemen, oo ay ku jiraan iibinta hubka.”, ayuu yiri Biden.
Sacuudi Carabiya oo ay wehliyaan xulafadiisa oo ay ku jiraan Imaaraatka Carabta (UAE), ayaa hogaaminayay dagaal ka dhan ah Yemen tan iyo bishii Maarso 2015 iyadoo ujeedku yahay in dib loogu soo celiyo dowladdii hore ee taageertay Riyaad.
Dagaalka waxaa sidoo kale weheliyay go’doomin dhan walba ah oo loogu talagalay waddanka saboolka ah. Waxay dishay tobanaan kun oo Yamaniyiin ah waxayna Yeman u rogtay dhibaatada bini’aadanimo ee ugu xun adduunka
Maqaal horeDowladda Soomaaliya Oo Deeq Raashin Ah Gaarsiiyay Degmada Diinsoor
Maqaal XigaBooliska Puntland oo sheegay in ay ka hortageen gabadh is gubi rabtay